အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page7| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမျိုးသမီးတွေ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းစေဖို့ ...
25.11.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးဟာ လူတစ်ကိုယ်လုံး ကျန်းမာဖို့ အရမ်းကို အရေးကြီးတယ်နော်။ အနံ့အသက်တွေ ကင်းစင်ဖို့၊ ယားယံတာတွေ မဖြစ်ေ...
ရင်သားကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၈) သွယ်
24.11.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
၁။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို အမြဲသတိရှိပါ။
လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်း...
23.11.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ရာသီသွေးဆင်း နည်းလား၊ များလားဆိုတာကို သိဖို့ဆိုရင် ပုံမှန် ဘယ်လောက်ဆင်းလေ့ရှိလဲ ဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်လတစ်ခါ သားအိမ်နံရံလေးတွေ...
9.11.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ့်ရဲ့နို့သီးခေါင်းက အရေပြားထဲကို ချိုင့်ဝင်နေလား? အပြင်ကို စူထွက်နေလား? နို့သီးခေါင်း ချိုင့်ဝင်နေတဲ့သူတွေ သိထားသင့်တဲ...
အတွင်းခံတွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဝတ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
3.11.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေဖို့ အင်္ကျီတွေကိုလည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဝတ်ဖို့ လူကြီးတွေက သင်ထားမှာပါ။ နေ့တိုင်း မနက် နိုးလာရင...
ရင်သားကင်ဆာကို ကုသပျောက်ကင်းခဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ အတွေ့အကြုံ
1.11.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်ခန့်က အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ခံစားခဲ့ရသူတစ်ဦးရဲ့...
ကင်ဆာ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့ သားအိမ်အလုံးအကျိတ်တွေ
19.10.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
Fibroids လို့ခေါ်တဲ့ အသားလုံးကတော့ သားအိမ်ကြွက်သားထဲမှာ ကြီးထွားလာတဲ့အလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုံးရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ အလုံးရှိတဲ့နေ...
ကမ္ဘာ့ဘော်လီမဝတ်ရေးနေ့ No bra day နဲ့ ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း
13.10.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကမ္ဘာ့ဘော်လီမဝတ်ရေးနေ့ No bra day က ဒီနေ့အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ပါတဲ့။ အိမ်မှာနေတဲ့ မမတွေ ဒီနေ့မနက် ခြောက်နာရီကနေ နောက်နေ့မနက် ၆ နာရီထိ ဘော်လီ...